Garoowe:-Guddiga difaaca dowlada Puntland ayaa shir jaraa`id ku qabtay maanta magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxaana Shirkooda Jaraa,id ay uga hadleen xaalada gobalka Sool iyo howlgalo ciidamada Puntland ka fuliyeen Buuraha Calmadow.
Wasiirka Wasaarada arimaha Gudaha ee dowlada Puntland C/laahi Cali Xersi Timacadde oo ayaa mar labaad ku celiyey in Maamulka S/land uu dhibaato iyo tacadiyo ku hayso shacabka ku dhaqan gobalka Sool .
Dhanka kale wasiirka Warfaafinta ee Puntland ayaa sidoo kale ka hadlay Diyaarad ay Maamulka S/land ku soo cesheen Garoonka Diyaaradaha ee Cigaal wuxuuna ku tilmaamay nasiib daro.
Sidoo kale Gudiga Difaaca Puntland waxuu sheegay in hawlgalkii Sool uu wali sii socdo doono Gudigu waxuu shacabka Puntland gudo iyo dibadba ugu baaqay in ay ogaadaan in dullaanka laba geesood ah uu socdo Puntland kaas oo ay iska kaashanayaan Somaliland iyo Al-Shabaab
Ugu Danbeyntii Guddiga difaaca Puntland ayaa waxaa uu hanbalyo iyo bogaadin udiray Ciidamada difaaca Puntland kuwaas oo xalay si xun ugu laayey Buuraha Calmadow kooxda Al Shabaab ee ku dhuumaaleysaneysa Buuraha Calmadow.
Maamulka S/land ayaa in badan beeniyey eedeynta uga imaaneysa maamulka Puntland iyaga oo sheegay in ay marna wax taageero ah iyo garab ayna midna siin kooxda Al-Shabaab.
Xaalada Colaadeed ee ka dhex aloosan labada Maamul ee Somaliland iyo Puntland ayaa maraya meel xun maba jiraan cid ka dhexwada Labada Maamul marka laga reebo baaqyo gooni gooni ah oo ay dirayaan waxgaradka Soomaaliyeed.
Hoos ka Daawo Guddiga difaaca Puntland oo shir jaraa`id ku qabtay magaalada Garoowe